Ahoana no hitsitsiana solika - Victor Mochere
Ny vidin-tsolika tsy mitsaha-mitombo hatrany no mahatonga ny fahasorenan’ny mpitondra fiara. Mba hanampiana ny mpamily hitsitsy vola amin'ny famenoana, nanangona ny torolalana farany momba ny fiara ara-toekarena izahay. Indraindray fantatra amin'ny hoe 'hypermiling' na eco-driving, izany dia hanampy anao hampitombo ny isa lehibe indrindra amin'ny kilaometatra isaky ny galona (mpg) na kilometatra isaky ny litatra (kpl). Na dia azo inoana aza fa ny hafainganan'ny fiaranao no anton-javatra manan-danja indrindra misy fiantraikany amin'ny fanjifana solika, misy fomba maro hafa ahafahanao manova ny fahazaranao mitondra fiara izay hisy fiantraikany lehibe amin'ny vola laninao amin'ny paompy.
1. Ataovy azo antoka fa mikolokolo ny fiaranao ianao
2. tongotra havanana malefaka: Fiara avo indrindra azo atao ao anatin'ny fetran'ny hafainganam-pandeha
3. Eritrereto: Miezaha tsy ho very fotoana
4. Mampiasa solika bebe kokoa ve ny fanaraha-maso ny sambo?
5. Aza taritina midina
6. Mampiasa solika ve ny AC sy ny hafanana?
7. Manambatra ny dia: Ny maotera mafana dia mahomby kokoa
8. Hamafiso ny entana
Ny fikojakojana sy ny serivisy tsy tapaka dia manatsara ny fahombiazan'ny fiaranao, ary noho izany dia afaka manatsara ny fanjifana solika. Zava-dehibe indrindra ny hahazoana antoka fa ny kodiaranao dia miakatra amin'ny fanerena marina araka ny voalaza ao amin'ny boky torolalana ho an'ny tompony satria ny kodiarana ambany sy be loatra dia misy fiantraikany ratsy amin'ny toekarena solika. Miankina amin'ny enta-mavesatra entinao ny fanerena kodiarana: raha manana mpandeha sy entana efatra ianao dia mila ampitomboina ny kodiaranao amin'ny tosi-drà ambony indrindra.
Ny hafainganam-pandeha tafahoatra no antony lehibe indrindra mandevona lasantsy ka ny fananana tongotra havanana maivana sy ny fiantohana fa malefaka ny hafainganam-pandeha rehetra dia tena zava-dehibe amin'ny fitondrana fiara mitsitsy. Mazava ho azy fa tsy maintsy manafaingana imbetsaka foana ianao amin'ny dia iray, saingy tsy midika izany fa tsy maintsy miala ianao. Angamba ny tsiambaratelo lehibe indrindra amin'ny fahazoana mpg/kpl avo dia ny mitondra fiara amin'ny fitaovana avo indrindra ho an'ny fiaranao nefa mitazona ao anatin'ny fetran'ny hafainganam-pandeha. Ny toro-hevitra tsara indrindra amin'ny faritra an-tanàn-dehibe dia ny manova ny fitaovam-pitaterana haingana araka izay tratra miaraka amin'ny fihodinana ambany indrindra, mety amin'ny 2000rpm eo ho eo. Tsarovy fa ny hafainganam-pandehan'ny maotera iray dia ny solika ampiasaina.
Ity hafainganam-pandeha ara-toekarena faran'izay tsara ity dia tsy mitovy amin'ny fiara tsirairay. Na dia misy aza ny hafainganam-pandeha mety tsara, ny toetry ny lalana sy ny gradients dia matetika tsy mamela anao hanao izany hafainganam-pandeha izany ka mila manamboatra sy mianatra manitsy ny fiaranao araka ny lalana eo aloha ianao, teknika antsoina matetika hoe hypermiling. Amin'ny ankapobeny, tsy misy hafainganam-pandeha tsara indrindra amin'ny toekarena solika. Amin'ny ankapobeny, ny fiara dia mahomby indrindra amin'ny 45-50mph. Ary koa ny fahasamihafan'ny toekarena solika isaky ny fiara, dia miankina amin'ny lafin-javatra maro hafa toy ny fanerena kodiarana, ny fisian'ny tafo ary ny fomba mitondra fiara.
Ny fitazonana ny fiara mandeha amin'ny hafainganam-pandeha mety dia ilaina amin'ny toekarena solika. Mazava ho azy fa miankina amin'ny fahasahiranan'ny fifamoivoizana sy ny zava-mitranga eny amin'ny arabe mialoha izany, fa ny fihemorana sy ny tsy maintsy hanafainganana indray dia mampiasa solika bebe kokoa. Ny torohevitra tsara indrindra dia ny mitondra fiara araka izay azo atao, amin'ny fampiasana moramora ny familiana, ny accelerator ary ny frein. Rehefa miadana dia zava-dehibe ny mijanona amin'ny fitaovam-pitaterana satria ny fametahana solika ao amin'ny motera tsindrona solika dia mandeha avy eo, midika izany fa saika tsy misy solika ampiasaina mandritra ny fijanonana.
Miezaha mialoha izay hitranga eo anoloanao amin'ny fijerena tsara ny ho avy. Amin'izany fomba izany dia ho hitanao ny jiron'ny fifamoivoizana amin'ny mena izay midika fa afaka miverina amin'ny accelerator ianao na miadana ho azy ary mety hivezivezy hatrany fa tsy mijanona. Manimba ny fanjifana solika ny fiara miakatra havoana. Rehefa mahita havoana ho avy ianao dia miezaha hanafaingana kely alohan'ny hahatongavanao azy, dia mialà sasatra rehefa miakatra ianao. Tokony ho ampy hampihenana ny fanjifana solika fanampiny ny hafainganana fanampiny.
Ny fifehezana cruise manampy amin'ny famatsiana solika ihany rehefa mitondra fiara eny amin'ny toerana fisaka tsy tapaka, noho izany no tsara indrindra natokana ho an'ny fiarandalamby, izay mamela ny fiara amin'ny fitaovana ambony indrindra ary mandeha moramora, mampiasa solika kely indrindra. Ny iray amin'ireo fanalahidin'ny fitsitsiana solika dia ny mitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha tsy tapaka, ny fanaraha-maso ny cruise dia afaka manao izany amin'ny fomba mahomby amin'ny tany fisaka, ka mahatonga ny fiaranao ho mahomby araka izay azo atao amin'ny alàlan'ny fanilihana ny hafainganam-pandeha tsy ilaina. Na izany aza, raha mampiasa tsy tapaka ny fanaraha-mason'ny dianao ianao, fa tsy amin'ny lalana fisaka, dia hahita olana mety hampitombo ny fanjifana solika ianao.
Izany dia satria ny fanaraha-mason'ny dianao dia ho miadana kokoa amin'ny fihetsiky ny fiovan'ny gradient, izany hoe rehefa tonga eo an-tampon'ny havoana iray - amin'izay fotoana izay dia manaisotra ny tongotrao amin'ny accelerator ianao mba hitazonana ny hafainganam-pandeha tsy tapaka rehefa midina - ny fanaraha-maso ny dia dia hihena. tohizo ela kokoa ny herinaratra fa tsy hitany ny fiovan'ny gradient eo anoloanao. Hiharatsy ny fanjifana solika rehefa mitondra fiara tsy tapaka.
Aza avela hipetraka eo ny barany sy ny boaty tafo, satria miteraka fanoherana ny rivotra izany ary mahatonga ny fiaranao hampiasa solika bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fiantraikan'ny 'tarika'. Mihabetsaka izany rehefa mitondra fiara ianao. Misy vokany mitovy amin'izany koa ny mitondra fiara amin'ny varavarankely misokatra.
Eny, marina izany. Aza mampiasa ny famerana mari-pana raha tsy hoe tena ilaina satria mampiasa herin'ny motera izy io ka mampitombo ny fanjifana solika. Mandeha amin'ny hafanana sy ny fampangatsiahana izany, koa miezaha miakanjo mifanaraka amin'ny toetr'andro, na dia ao anatin'ny fiaranao aza, raha tena mampanahy ny fahombiazan'ny solika.
Eritrereto ny manao dia mandroso sy miverina fa tsy dia fohy maromaro. Rehefa mafana ny motera dia hiasa amin'ny fomba mahomby indrindra izy io fa ny fanombohana mangatsiaka maromaro dia hampitombo ny fanjifana solika na dia mety ho mitovy aza ny totalin'ny kilaometatra.
Na dia tsy hitondra fiovana lehibe indrindra amin'ny isa mpg/kpl anao aza izany, dia azo inoana fa ny mavesatra ny fiara iray dia ny solika hampiasainy. Noho izany antony izany, aza mitahiry entana tsy ilaina ao anaty baoty satria izy rehetra dia manampy lanja ny fiaranao, izay tsy hanampy anao amin'ny toe-karenanao amin'ny fotoana maharitra.
Mba hametrahana ny karazana firaketana eran'izao tontolo izao ny fahombiazan'ny solika dia mila miandrandra araka izay azo atao ianao mba hisorohana ny loza mety hitranga. Ity dia fahazarana mitondra fiara tsara amin'ny ankapobeny fa tena ilaina tokoa. Mitohy hatrany ny hetsika fa tsy ho very maina. Ny fanafainganana amin'ny fampiatoana dia tena lafo tokoa amin'ny resaka fanjifana solika ary toy izany koa ny fiakaran'ny fiolahana rehetra. Andramo ny tsy hampiasa frein be loatra amin'ny fanalefahana ny throttle mba hampihenana ny hafainganam-pandeha. Raha afaka mandeha miadana ianao fa tsy mijanona amin'ny fifamoivoizana dia tsara izany, saingy tsy maintsy mahatsiaro tena ianao fa tsy manafintohina ny mpamily hafa amin'ny fametrahana banga be loatra ao ambadiky ny fiara eo aloha.
Mila mihaino ny motera ianao mba tsy hampiasa rev be loatra fa mila mampiasa ampy, ka entam-barotra tsara satria tsy tianao ho miasa be koa ny fiara. Raha manakatra rond point ianao dia mila mahafantatra raha ho vitanao tsy hihena be loatra amin'ny fanitsiana tsara ny hafainganam-pandehanao alohan'ny hidiranao. Ary, raha manana havoana miakatra ianao dia mila mitsara tsy ny gradient fotsiny, fa ny faharetany ihany koa. Raha hitanao fa fiakarana kely fotsiny izany dia tsara kokoa ny miorim-paka, manafoana ny hafainganam-pandeha ary mijanona amin'ny fitaovana fa tsy miova aloha. Ny havoana tsirairay noho izany dia samy hafa ary mazava ho azy fa misy singa iray amin'ny vinavina.